Iimpawu eziPhambili eziThoba eziLwazi Ukufumana ulwazi lwakho
Imiba Ukuthintela noKhuseleko
Ubume bokuba ubuNdobi buya Kubiza amawaka
Ubusela bokuba ngumntu xa usebenzisa ngobuqhetseba ulwazi lwakho lomntu siqu, njengegama lakho, umhla wokuzalwa, Inombolo yoKhuseleko lweNtlalo, kunye nedilesi, ngenzuzo yabo yemali, kuquka ukufumana iitaliti, ukufumana mboleko, ukuvula ibhanki, okanye iakhawunti yekhadi lesikweletu okanye fumana ikhadi le-ID.
Ukuba uba lixhoba lokutshitshiswa kobunikazi, amathuba okuya kubangela umonakalo omkhulu kwiimali zakho kunye negama lakho elihle, ngakumbi ukuba awukufumani ngokukhawuleza.
Nangona usibambe ngokukhawuleza, unokuchitha iinyanga kunye namawaka eedola ukuzama ukulungisa umonakalo owenziwe kwinqanaba lakho lesikweletu.
Unokufumanisa ukuba uyamtyholwa ulwaphulaphulo ongazange uwenze ngenxa yokuba umntu wasebenzisa ulwazi lwakho lomntu ukuba enze ulwaphulo-mthetho egameni lakho.
Ngenxa yoko, kubalulekile kumhla wekhompyutha ukukhusela ulwazi lwakho ngokusemandleni akho. Ngelishwa, kukho amasela ngaphandle apho ulindele ukuba wenze iphutha okanye ungakhathazeki.
Kukho iindlela ezahlukeneyo zokuba amasela olwazi angena ngokuba ulwazi loluntu lwabanye. Nazi iindlela eziqhelekileyo ezisetyenziswe ngamasela olwazi kunye neendlela zokuphepha ukuba lixhoba.
Abaqashi Bamazisi Bafumana Ulwazi Luni?
I-Dumpster diving xa umntu ehamba ngotshani efuna ulwazi lomntu siqu olungasetyenziselwa ukutyhulwa kwezinto zobunini. Amasela ebhaliso abheka iibhidi zekhadi lesikweletu, izitatimende zasebhanki, iibhilikhwe zonyango kunye ne-inshurensi, kunye neefom zezemali ezindala ezifana neefom zerhafu zamandulo.
Ukweba Imeyili Yakho
Amasela e-Identity will often target the person and steal mail directly from their mailbox. Amasela aya kuba nayo yonke i-imeyile eqondiswe ngokutshintshwa kwesicelo sedilesi esenziwe kwiofisi yeposi. Amasela azisiyo afuna izitatimende zasebhanki, iibhilidi zekhadi zetyala, ulwazi lweerhafu, ulwazi lwezokwelapha kunye nokuhlolwa komntu.
Ukuba iWallet yakho okanye iPhese
Amasela e-Ident aphumelela ngokufumana ngokungekho mthethweni ulwazi lomntu kwabanye, kwaye yintoni enye indawo engcono yokufumana ngaphandle kwesikhwama okanye isikhwama. Ilayisenisi yokuqhuba, amakhadi ekweretheni, amakhadi okukhawuleza kunye ne-slip yebhithi yebhanki, ifana negolide kwizala zobungqina.
Amasela e-Identity usebenzisa isilingo samaphuzu omvuzo wokubambisa abantu ukuba banike ulwazi lwabo lwekhadi lobuqu kunye nekhredithi ngefowuni. Izazisi zobungqina ziza kuxela umntu ukuba banqobile ukhuphiswano kwiholide yamahhala okanye esinye isipho esikhulu, kodwa ukuba kufuneka baqinisekise ulwazi lomntu siqu, kuquka umhla wokuzalwa, ukubonisa ukuba baneminyaka engaphezu kwe-18 ubudala. Baza kuchaza ukuba iholide ikhululekile, ngaphandle kwerhafu yokuthengisa, kwaye icele "ophumelelayo" ukuba abonelele ngekhadi lesikweletu. Zivame ukuba zizwakala ngathi isigqibo kufuneka senziwe ngokukhawuleza, okanye umntu uya kulahlekelwa umvuzo.
Ukukhishwa kweeMali okanye iNani leKhadi leMatyala
Ukukhuphaza xa amasela asebenzisa idivayisi yokugcina idatha ukuze athabathe ulwazi oluvela kumgca wamaganeti we-credit, debit okanye i-ATM kwikharityhulam ye-ATM okanye ngexesha lokuthenga.
Xa ukukhwela kwi-ATM, amasela aya kufakisha abafundi bekhadi (ababizwa ngokuba yimifanekiso) phezu komfundi wekhadi lokugcina kunye nokuvuna kwedata kuwo onke amakhadi atyunyiwe.
Amanye amasela abeka ipayipi ye-PIN yenkohliso phezu kwenene ukuze athabathe iipinifethi ze-victim (manani okuchonga) xa bengena. Enye indlela eqhelekileyo yokwenza oku kukufaka iikhamera ezincinci ukufaka i-PIN efakwe kwinombolo yedatha. Ukugqithwa kwamagxa, okuyiloo nto umntu efunda phezu kwegxala lomsebenzisi wekhadi, kuyindlela eqhelekileyo yokufumana iinombolo zomntu.
Xa isela libuyele kwi-ATM kwaye iqokelele ifayile yeenkcukacha ezibiwe, zingangena kwi-ATM kwaye ziba imali kwiakhawunti ezivunyiweyo. Amanye amasela aqokelela amakhadi ekredithi ukuthengisa okanye ukuzisebenzisa.
Ukukhwela ngokukhawuleza kunokwenzeka nanini na xa umntu onomfundi wekhadi ledijithali enokufikelela kwi-credit card yakho. Ingenziwa ngokukhawuleza xa ikhadi linikelwa, njengendawo yokutya apho iqhutywe khona ukuba isetyenziselwe ukuthatha ikhadi kwenye indawo ukuba iswayide.
"Inkohlakalo" yinto yokugonywa apho i-thief yobunikazi ithumela i-imeyli ngokukhohlisa ukuba ivela kwintlangano esemthethweni, i-arhente karhulumente okanye ibhanki, ukunyanzela ixhoba ekunikezeni ulwazi lomntu siqu njengeenombolo ye- akhawunti yebhanki, inombolo yekhadi lesikweletu okanye amaphasiwedi. Ngokuqhelekileyo i-imeyile izothumela amaxhoba kwiwebhsayithi ye-phony eyenzelwe ukuba ibonakale njengoshishino loqobo okanye urhulumente karhulumente. i-eBay, i-PayPal kunye ne-MSN isetyenziselwa rhoqo kwizikhwama zobuqhetseba.
Ukufumana iNgxelo yakho yeMboleko
Ezinye izaziso zesazisi ziya kufumana ikopi yengxelo yakho yekhredithi ngokubuza njengomqeshi wakho okanye i-ejenti yokuqeshisa. Oku kuya kubanika ithuba lokufikelela kwimbali yakho yematyala kuquka namanani akho ekhadi lesikweletu kunye nolwazi lweboleko.
Iirekhodi zezobizo zoshishino zibandakanya ukwebiwa kweefayili, ukukhangela kwiifayile zekhompyutheni okanye ukutyhola umqeshwa ukufikelela kwiifayile kwi shishini . Amasela azisiyo ngamanye amaxesha aya kuhamba udoti webhishini ukuze afumane iirekhodi zabasebenzi ezihlala ziqulethe iinombolo zokhuseleko loluntu kunye nolwazi lwabaxhasi kwiiresi.
Ukwaphulwa kwedatha yenkampani yilapho ulwazi olukhuselekileyo nolunobumfihlo lukopishwa, lubonwa okanye lubiwe ngumntu ongagunyaziswanga ukufumana ulwazi. Ulwazi lunokuba ngumntu okanye imali kuquka amagama, iidilesi, iinombolo zomnxeba, iinombolo zokhuseleko loluntu, ulwazi lwezempilo lomntu, ulwazi lwebhanki, imbali yemboleko kunye nokunye. Xa sele ikhutshwe le ngcaciso, ayiyi kuphinda iphindwe kwaye abantu abachaphazelekayo banomngcipheko ophezulu wokuba bazisiwe.
Ukukhutshwa komthetho kukuqhelanisa nokufumana ulwazi lomntu lomntu usebenzisa i-tactics engekho mthethweni, kwaye uthengise ulwazi kubantu abaya kusebenzisa, phakathi kwezinye izinto, ukweba loo mntu,
I-Pretexters ingabiza kwaye ibange ukuba ibiza ukusuka kwinkampani yekhampani kwaye yenza inzululwazi yenkonzo. Emva kokutshintsha ama-sweetries, babeza kubuza malunga naziphi na iingxaki zekhefu zakutshanje, kwaye ubuze ukuba ucinga ukugqiba uphando olutshanje. Bangacela ukuhlaziya iirekhodi zakho, kubandakanywa ixesha elifanelekileyo lomhla ukubonelela ngeenkonzo kunye nokufumana igama lakho, idilesi kunye nenombolo yocingo. Abantu baya kufuthi bazinikele ngolwazi ngokuzithandela, abameli abanomdla abaphulaphula kakuhle.
Ukuxhotyiswa ngolwazi lomntu siqu, i-pretexter inokugqiba ukwenza ukukhangela ulwazi oluntu malunga nawe, kwaye ufunde ubudala bakho, ukuba ungumnini wezindlu, ukuba uhlawule irhafu yakho, indawo ohlala kuyo ngaphambili, kunye namagama omdala wakho bantwana. Bangabuka kwiprofayili yakho yemidiya yoluntu ukuze ufunde ngembali yakho yomsebenzi kunye nekholejini owaye kuyo. Baya kuthi ke iinkampani ezidibeneyo ukuze ufumane ulwazi olwaneleyo ukuze ufikelele kwingcaciso yakho yezemali, iirekhodi zezempilo kunye nenombolo yokhuseleko loluntu.
Indlela yokusebenzisana nomntu onokusongela ngesixhobo
Hlala Ukhuselekileyo Ngeeholide
Indlela Yokujonga Imali Engafaniyo
I-Library ye-GD - Iisiseko zeDraw nge-PHP